१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १३:५७ मा प्रकाशित
२०७७ फाल्गुन १२ बुधबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेसँगै पक्ष र विपक्षमा नेता विभाजित भए । नेकपा दुई फ्याक नै भयो ।
प्रधानमन्त्रीको कदम सही कि गलत भन्नेबारे एकातिर सर्वोच्च अदालतमा बहश भइरहेको थियो भने अर्कातिर नेताहरुका धारणा पनि आइरका थिए । कानूनी पृष्ठभूमि मात्र होइन संविधान जारी हुँदाको बखत संविधासभाको अध्यक्ष हुनुका नाताले धेरैले सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले यसबारे के बोल्लान् भन्नेमा नागरिकको चासो र कौतुहलता थियो ।
तर कुरा घुमाउन र आफु अनुकुल ब्याख्या गराउन सिपालु नेम्वाङ्ले सर्वोच्चमा विचाराधिन विषयमा आफु तत्काल नबोल्ने र फैसला आए लगत्तै बोल्ने भनेर कुटनीतिक पारामा प्र्रश्नहरुलाई निरन्तर छलिरहे ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सार्वजनिक सभामा संबोधन गर्दै नेम्वाङ्ले प्रधानमन्त्री ‘यस्तो भन्नुहुन्छ’, ‘प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो लाग्छ’, ‘उहाँको विश्वास यस्तो छ’ लगायत शर्त राखेर संसद विघटन सहि नै हो भन्ने आशयका धारणा राखिरहे ।
विराटनगरको सभामा उनले डा बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटन गरेको समय भन्दा अहिलेको अवस्था धेरै नै सहज रहेको जिकिर गर्दै त्यसबेला राष्ट्रप्रमुख पनि नभएको, अर्को चुनाब पनि कहिले हुने भन्ने तय नभएको र संविधान पनि नभएको बेलामा त संविधानसभा विघटन गरेर देशलाई अँध्यारो सुरुङमा फसाइएको थियो भने अहिले त राष्ट्रप्रमुख भएको, संविधान रहेको, नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरिएको लगायत कारण देखाएर यो कदम सहि हो भन्ने मत जाहेर गरे ।
अर्को सभामा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर हुनेमा प्रधानमन्त्री ओली २ सय प्रतिशत ढुक्क रहेको र आफुले ओलीलाई अति नै विश्वास गरेको बताए । यसको घुमाउरो आसय यो कदम ठिक हो भन्ने नै हुन्छ।
सर्वोच्चले मंगलबार, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई बदर गरिदिएपछि नेम्वाङ्ले विघटनको सिफारिस कानूनी र राजनीतिक दुवै रुपमा सहि थिएन भनेर आफुले पहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको जिकिर गरेका छन् ।
नेम्वाङ्ले संसद विघटन कानूनी र राजनीतिक रुपमा सही होइन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको जिकिर गरे ।
आखिर संसद विघटन गर्ने कुुरा सहि होइन रहेछ भन्ने कुरा त सर्वोच्चको फैसलाले पुष्टि गर्यो होइन ?
संसद विघटन गर्न मिल्थ्यो वा मिल्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न अब रहेन । संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडी मैले धेरै प्रसंगमा यसबारेमा आफ्ना कुरा राखेको छु । पत्रकारसँग अन्तबार्ताका क्रममा तथा संसदबाट कक्षाको आयोजना गरेर पनि मैले आफ्ना कुराहरु प्रष्ट शब्दमा राखेको छु ।
यसकै आधारमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई अहिले संसद विघटन गर्ने कुरा कानूनी रुपमा र राजनीतिक रुपमा पनि ठीक हुँदैन अहिले त्यतातर्फ नजाउँ भनेर त्यतिबेला सुझाव दिएको हो । यो सार्वजनिक पनि भएको छ र मैले त्यस कुरालाई सँधै स्वीकारेको पनि छु ।
तर सम्मानित प्रधानमन्त्री ज्यूले यो मेरो बाध्यता हो । मलाई काम गर्न दिइएन भनेर संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । सम्मानित राष्ट्रपतिबाट त्यो सदर भयो ।
त्यसलगत्तै यो विषय सर्वोच्चमा गयो । त्यसपछि यो अदालतको विषय भयो । अब विचाराधिन विषयमा बोल्न मिलेन । अदालतमा विचाराधिन विषयमा संसदमा पनि छलफल गर्न पाइँदैन भनेर संविधान मै लेखेको छ ।
म संविधानलाई मान्ने मान्छे भएकाले पनि बोल्न मिल्दैन थियो । संविधानले सर्वोच्चलाई संविधानको आधिकारिक ब्याख्याता भनेको छ । त्यसैले अब सर्वोच्चको कुरालाई मान्नुपर्छ र यसलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ । यसबारेमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूसँग पनि कुरा गरें । उहाँले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्छु भन्नुभएको छ । अब त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै केही राजनीतिक टिप्पणी पनि छेउछेउबाट भएको पनि म सुन्छु । यो फैसलाले केही राजनीतिक विषयलाई सुल्झाउन सकेको छैन ।
ती विषयहरु चाहिँ के के हुन् त ?
धेरै छन् । अहिले त्यतातर्फ नजाउँ । जस्तो नेकपाको आधिकारिकताको कुरा पनि छ । अहिले त एउटै नेकपा उपस्थित छ नि त संसदमा । तर अब यस्ता कुरालाई समाधान गर्दै राजनीतिक दल अघि बढ्नुपर्छ । सर्वोच्चको फैसलालाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले अब राजिनामा दिनुहोला त ?
अब प्रधानमन्त्री अर्थात सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले १३ दिन भित्रमा संसद बोलाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संसदमा जाने भएपछि के के गर्ने गराउने सबै त्यहीँबाट गरे भै गयो नि ।
अब देशकाे राजनीति चाहिँ कसरि अघि बढ्छ त ?
हामीले लामो मेहनतबाट जनतालाई आदर्श मानेर संविधान बनाएका छौं । नागरिकको मत पाएर संसदमा गएर संविधान संशोधन गर्न सक्ने ब्यवस्था पनि गरेका छौँ । त्यसका लागि सबै दलहरु एक हुनुपर्छ र अघि बढ्नुपर्छ । मतलब अहिले विभाजित नेकपा पनि एक हुनुपर्छ ?
अवस्य नै अब नेकपा पनि एक हुनुपर्छ अरु दल पनि मिलेर सम्बृद्धिका लागि अघि बढ्नुपर्छ । देशलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
तर अहिले आन्दोलन गरिरहेको नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले त अब नेकपा एक हुन सम्भव छैन भनिसक्नुभयो नि ?
म नेताहरुका भनाइबारे कुनै टिप्पणी गर्दिन । उहाँले कहाँ कुन सन्दर्भमा के भन्नुभयो भन्ने कुरा गौण हो । यो कुराको टिप्पणी गर्नु हुँदैन र म गर्दिन पनि । तर अब हामी सबै एक भएर निरन्तर अघि बढ्न आवश्यक छ ।